musha / Blog / Chinese Mhuri, Chaizvoizvo Hazvina Kukodzera Kuparadzaniswa Kwechitatu?
2020 / 10 / 17 kupatsanuraBlog 1007 0
Whenever I talk about Japan with my friends, I can’t get rid of one topic: zvimbuzi.
Zvisinei, chii chinonyanya kundifadza pamusoro pezvimbuzi zveJapan hakusi iko kuseka kwakachena uye kwehutsanana dhizaini, asi mashandisiro anoita zvimbuzi.
MaJapan anoda kugeza, saka zvisinei nekuti imba yekugezera yakakura sei kana kuti diki, bhavhu rakajairika mudzimba dzese.
We have introduced the three separations before, and the reason why we are mentioning the three separations again today is because we found that there are a lot of people who don’t understand izvo zvakapatsanurwa zvitatu, uye ivo vanongotevera maitiro nekuda kwematanho matatu, vasina kunyatso tarisa kuti ndizvo zvavanoda here kana kuti kwete.
So today we’re going to have a good chat about chii chaizvo chiri kupatsanurwa, uye kuti kana kwete kupatsanurwa kunokosha.
Ndezvipi Chaizvoizvo Kuparadzaniswa Kwevatatu?
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kujekesa pfungwa yekuparadzanisa katatu, hazvireve kuwedzera gonhi regirazi kana keteni yekugezera kuimba yekugezera kunyangwe kana yakakamurwa.
The real three separations means that the washroom, toilet and shower partitions do not overlap each other’s space and can be used by three people at the same time. Mune mamwe mazwi, kupatsanurwa katatu makamuri matatu akazvimirira, achagovana basa rekugezera, rakasununguka kune mumwe nemumwe pasina kupindira.
Kupatsanurwa kwechipiri ndiko kwechipiri kwakanakisa, chimbuzi chakakamurwa kuita nzvimbo mbiri dzakazvimiririra, vanhu vaviri vanoshandisa imba yekugezera panguva imwe chete.
Inofananidzwa neyekudyidzana yekugezera, maviri kupatsanura uye matatu kupatsanurwa inogona kuwana kupatsanurwa kwemvura uye yakaoma, iyo inowedzera zvakanyanya kunyaradzwa kwekushandisa imba yekugezera.
Kuenzaniswa nekupatsanurwa, iyo yekuparadzanisa matatu-yakazvimiririra zvachose, kupatsanurwa kwemvura uye kuoma kuti uwane zvakanyanya, uye panguva imwechete inogona kusunungura mhuri pakushandisa kupokana uye kumanikidza, inovandudza zvakanyanya kugona kwekushandiswa kweimba yekugezera.
Fungidzira mhuri yevatatu. Husiku, amai vachigeza, baba vanogona kuenda kuchimbuzi uye vana vanogona kugeza panguva imwe chete. Kana huwandu hwevanhu hwakura, nezvizvarwa zvitatu mumhuri imwechete, zvakanakira kupatsanurwa katatu zviri pachena.
Ndiwo wega Mubatsiro Wekupatsanurwa-Kwezvizvarwa Zvitatu?
Pfungwa yakakosha ndeiyi that it’s not just a need for all Chinese families.
Mushure mezvose, chinhu chinonyanya kufarirwa chatimbove nacho chidimbu chimwe chete
Naizvozvo, maitiro edu kune matatu akapatsanurwa anofanirwa ingatariswe kwete kubva kune yepfungwa maonero, asi kubva kune anoshanda.
Yezve imba inoda chaizvo kupatsanurwa katatu, chekutanga vagari vepamba vanofanira kunge vari vatatu kana kupfuura, kana zvisina kudaro hapana chikonzero.
Chechipiri, imba ine uye ine chete imba yekugezera imwe chete. Kana mhuri iine dzimba mbiri dzekugezera, chero bedzi vaviri vakaita maviri akapatsanurwa, zvakare vanogona kutowana kusangana kwezuva nezuva kwaro.
Chinhu chekupedzisira kufunga ndechekuti nhengo dzemhuri dzajaira kugeza. Bhati rinotora nguva yakareba kudarika shawa, uye bhavhu riri munzvimbo inogona kushandiswa nemunhu mumwe chete. Naizvozvo, zvakafanira kupatsanura bhavha kuti mhuri hombe igeze nekuzorora, ndicho chikonzero nei vanhu veJapan vachida kugeza.
Pamusoro pekuti iko kuita kunosiyana kubva kune imwe mhuri kuenda kune imwe, kune kumwe kunetseka kumhuri dzeChinese: zvakaoma kuti uzive kupatsanurwa katatu.
Chikonzero ndechekuti saizi uye chimiro cheimba yacho chinoda zvikuru
Kuti uwane zvakapatsanurwa zvitatu, imba yekugezera haifanire kunge iri diki, uye izvo zvinodiwa nehukuru hwemhuri zvakatonyanya.
Maumbirwo akajairwa edzimba dzekugezera ndeaya: akamira, tambo yakatwasuka uye mraba.
Iyo chete yekugera yakareba yakatwasuka ndiyo inokwanisa kuita zvakapatsanurwa katatu, iyo nzvimbo yakanyatsopatsanurwa, ingo wedzera chikamu chinogona kuva.
The square yekugezera, kune rumwe rutivi, yaizoda nzvimbo inosvika angangoita 4.6 mativi emamirimita, according to Ms. Walkie’s estimate.
Kwayakaenda: yeruzhinji imba mudziyo
Kana iwe uchida kuishandisa zvakanaka, nzvimbo yacho inofanirwa kunge inosvika matanhatu mativi emamita.
Iyo yakajairika katatu nzira yekuparadzanisa yezvikwere
As for the slim toilet …… is unlikely to be able to achieve this, because to get to the innermost shower area, one would have to pass through the toilet (iyo tambo ine simba yaizofanira kuve ③ → ② → ①). Kana izvi zvaizadzikiswa, madziro aizoda kubviswa.
Kuparadzaniswa katatu kana Kupatsanurwa Kwechipiri
Chiri pachena ndechekuti chidimbu chimwe chinofanirwa, saka sarudzo yatakatarisana nayo ndeye kuve nekuparadzaniswa katatu kana kupatsanurwa kaviri.
Iye zvino maitiro ekuparadzanisa matatu muchimbuzi ari kunyanya kupisa, uye ini pachangu ndiri mutsigiri wekuparadzaniswa katatu, nekuti zvese kunyaradzwa nekugona kwekushandisa zvine zvazvakanakira.
Asi orenji anozvarwa muHuainan iri orenji, akaberekerwa muHuabei ndiHovenia, pakupedzisira kana katatu kuparadzana, kana kuti uone kana isingakwanise pakupedzisira zvinoenderana nemamiriro emuno, uye nekunyatsovandudza mufaro weye yavo yekugara index.
Semuenzaniso, nguva pfupi yadarika, mumwe waanoshanda naye ari mushishi kushongedza akawana maviri dhizaini dhizaini, dhizaini yekugezera iri maviri akapatsanuka uye matatu akapatsanurana zvichiteerana.
Marongero matatu ekuparadzanisa ari padivi rekwere, asi imba yekugezera yekutanga yakadzikiswa, saka unofanirwa kukwereta imwe nzvimbo kubva padyo nepakamuri.
Iyo mbiri-yekuparadzanisa dhizaini
Iyo mbiri-yakasarudzika dhizaini ndiyo yakajairika dhizaini, ine singi inobuda yega yega. Idzi dhizaini haina kunyatsonaka kana kushata, uye ese ari maviri akakodzera maererano nekushandisa nzvimbo.
Kupatsanurwa-nzira nhatu kune zvakwakanakira uye kuri nyore pane kupatsanura nzira mbiri kumhuri huru. Nekudaro, kupatsanurwa kwechipiri kunoda nzvimbo shoma uye kunokodzera mhuri diki.
Sarudzo pakati pekuparadzanisa katatu kana kupatsanura mbiri inofanirwa kunge yakavakirwa pane zvaunoda, pane kutsvaga zvinonzi fad.
Shamwari yaidzidza kuJapan yakahaya furati yemamita-masere makumi matatu nesere iri yega, iine imba yekugezera refu yakatwasuka yakatsemurwa-matatu, singi pakati, bhavhu + bhavhu kuruboshwe, uye chimbuzi kurudyi.
Sezvo nzvimbo dzese nhatu dzakazara zvakanyanya, anowanzo vhura musuwo wechimbuzi uye obatanidza iyo singi, iyo inoichinja kuita chikamu chechipiri.
Nekudaro, imwe hama iyo yakangotamira muimba nyowani nguva pfupi yadarika, semhuri yevashanu, yakaratidza kune mugadziri pamberi pekugadzirisa kuti aida imba yekugezera yakapatsanurwa katatu.
Nekudaro, iyo yekutanga chimbuzi nzvimbo yaive chete 4 mativi emamita, saka ndakakwereta 2 mativi mita kubva kune iri padyo yekurara kuti ndiwedzere nzvimbo yechimbuzi.
Nemienzaniso iyi miviri, ndeyekuratidza iwe kuti mhinduro chaiyo kana isiriyo kune sarudzo yematanho matatu kana maviri akapatsanurwa anozivikanwa iwe chete
Mufananidzo wakakodzera nepinterest
Pakapfuura :: Iwo Akanakisa Bathroom Matipi Akambo, All Mune Imwe Nzvimbo! Zvadaro: Rinobuda Pombi? Ngura? Mvura Iri Kunonoka Here? Maoko Ekugadzirisa Kwazvo
Unoziva Iwe Kuti Zvinoshatisa sei Imba yekugezera "Kunhuwa"? Tsvaga Izvo Zvakarurama ...
4.95m2 MaScandinavia Maitiro, Iri Bhawa Yevaviri Vaviri Ndiro Rakatonyanya St ...